K: ငါးခေါင်းဟင်း-ဘဲအရိုးပျောက်အစာသွပ် နဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်
ငါးခေါင်းဟင်း-ဘဲအရိုးပျောက်အစာသွပ် နဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်
တလောက... ဒန်ပေါက်ချက် နည်း ရှာ ရင်း.. အချက်အပြုတ်..အစားအသောက် ဘလော့ တွေ ဆီ ရောက်သွား ခဲ့ သည်။ အတော့် ကို စိတ်ချမ်းသာ စရာ ကောင်းသော.. ဘလော့ဂ် များပါပေ..။
လုလု တို့ ရှင်မင်း တို့ ဘလော့ဂ် လေး တွေ က...အတော် အစော တည်းက..လူသိများ ပြီးသား မို့.. ရောက်ဖူး နေပေမဲ့.. အဲဒီ နေ့က.. လင့် တွေ က..တဆင့် တဆင့် လျှောက်သွား ရင်း နဲ့...တော်တော့် ကို စုံသွားတာ.. တညနေ လုံး.. မထတမ်း ကို.. ၀င်းဒိုး အိတင်း နဲ့ ကွတ်ကင် (windown eating / window cooking) လုပ် ပြစ် လိုက် မိတော့တယ်။ မိန်းမ တော်တော်များများ သိပါတယ်။ ချက်နည်းပြုတ်နည်း.. တွေ..ပုံတွေ ကြည့်ပြီး..စိတ်ထဲ မှာ ချက်စား ရတာ ... သိုးမွေးထိုး ပုံစံ စာအုပ်တွေ ကြည့်ပြီး..စိတ်ကူး နဲ့..တမျိုး ပြီး တမျိုး ထိုး ရ တာ..ဘယ်လောက် အရသာ ရှိ တယ် ဆိုတာ..။ စိတ် နဲ့ ဆိုတော့.. အများကြီး လည်း ပြီးတာပေါ့..။ လှ ကလည်း လှ မှ လှ.. စားလို့က လည်း ကောင်း.. ဆို သလို..။
ဓါတ်ပုံ တွေ ကလည်း ကောင်း ဆိုရင်တော့. ပြောစရာ ကို မလို တော့ဘူး။ ကိုယ်တို့ တွေ တော်တော် များများ လည်း.. စားစရာ လေး တွေ..ချက်ပြုတ် ပြီး..လှနေရင်.. ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီး.. တယောက် ယောက် ကို ပြ ချင် နေ ရောလေ....ဟုတ်တယ် မလား..။ ဘလော့ဂ် ရှိရင် ရှိ.. မဟုတ်လည်း.. ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ.. တင် ကြ.. မစားရ ညှော်ခံ ကြ နဲ့... ဘာမှ တော့ လည်း မဟုတ်ပေ မဲ့..ပျော်စရာ လေး တွေ ..။
ပြန် စဉ်းစား ကြည့် တော့....လွန်ခဲ့တဲ့..၃ နှစ်ကျော်..ဘလော့ စ ဖွင့် တဲ့အချိန် .. ကိုယ့် လက်လှုပ် လိုက်သမျှ.. ကွန်ပြူတာ..မျက်နှာပြင် မှာ..ပေါ်လာ တဲ့.. ဘလော့ လေး ကို ကြည့်ရင်း...ဘာတွေ ရေး ရင်..ကောင်းမလဲ..ဘာတွေ တင်ရင် မကောင်းမလဲ ဆိုပြီး..ရင်တွေ ခုန် ခဲ့ တာ လေ..။ တကယ်ပါ..။ အရိုးသား ဆုံး နဲ့.. စိတ်အလှုပ်ရှား ဆုံး အချိန် လေး တွေ ပဲ...။ အဲဒီလို နဲ့.. ကွန်ပြူတာ ထဲ ရိုက် သိမ်း ထား တဲ့.. အစားအသောက် ပုံလေး တချို့ တင် ဖြစ်ခဲ့ သေး တယ်။ နောက်တော့.. အခါ အားလျော် စွာ.. အစားအသောက် အကြောင်း လေးတွေ ရေး ဖြစ် ခဲ့ ပေမဲ့.. အခု.. သေချာ ပြန်ပြီး.. ကိုယ့်ဘလော့ ရဲ့.. ခေါင်းစဉ် တွေ ကြည့်တော့.. food အောက်မှာ..၄ ပုဒ် လားပဲ ရှိ တယ် ..။
တကယ် က .. အစားအသောက် အချက် အပြုတ် လောက်.. လူတိုင်း ကို..စွဲ ဆောင် နိုင်တာ..ဘာမှ မရှိ ဘူးလို့ ပြောရင် ပိုမယ် မထင်ဘူး..။ ဟုတ်တယ်လေ... နုိုင်ငံရေး သမား တွေ လည်း အစား ကြိုက်.. မင်းသား မင်းသမီး တွေ လည်း အစားကြိုက်.. အမှိုက်ပုံ ပေါ်က..ကလေး တွေ လည်း အစား ကြိုက် ကြ တာပဲ..မဟုတ်လား..။ ဒါပေမဲ့.. ရိုးရိုး ကြိုက် တာ ထက် ပိုပြီး.. အနုပညာ တခု လို.. ဖြေဖျော်မူ တခု လို ဖြစ် လာ နေ တဲ့.. အကြောင်း.. Times မဂ္ဂဇင်း တခု မှာ ဖတ်လိုက် ရ တယ်။ Pop culture တခု လို ဖြစ် လာ နေ တဲ့.. အချက်အပြုတ် အစီ အစဉ် တွေ
အကြောင်း.. ခေတ် တခု ခြင်း စီ ကနေ.. ဆွဲ ထုတ် ပြ ထားတာ..။ နေ့ တိုင်း လည်း..တီဗီ ဖွင့် လိုက်ရင်.. အစားအသောက် နဲ့ပတ်သတ် တာ တခု ခု ကတော့..တလိုင်းလိုင်း မှာ လာနေတာ ပဲ..။ အစားအသောက် ချက်နည်း လုပ်နည်း တွေက.. pop ဖြစ်လာ တော့.. chef တွေ လည်း celebrity တွေ လို ဖြစ်လာ ကြ တော့ တာပေါ့..။
Iron chef ... celebrity chef .. top chef... pop chef...။ ဟော.. တလောက.. အော်ဇီ မှာ..အကြီး အကျယ် ပေါက်သွားတာ .. master chef ..။
ညနေ တိုင် ၇ နာရီ ခွဲ ရင်.. လူတိုင်း လုိုလို လုပ်လက်စ တွေ ပြစ်ပြီး.. တီဗီ ရှေ့ ရောက် ကြ ရတယ် လို့ တောင်.. အမွှန်းတင် ရေး ကြ တယ်။ လူတိုင်း ဟုတ် မဟုတ် တော့ မသိ.. ကိုယ်လည်း.. နောက်ပိုင်း အစီအစဉ် တွေ ကို.. စိတ်ဝင် တစား ကို ကြည့် ဖြစ်တယ်။ အစမ်း ရွေး ထားတဲ့..လူ ၂၅ ယောက် ထဲ ကနေပြီး.. တယောက် ပြီး တယောက် ထုတ် သွား တဲ့.. reality show biz တခုက.. ထင်တာ ထက် ကို.. ဟစ် တွေ ထိ ပြီး..ပေါက်သွား ခဲ့ တယ်။ အမလေး.. သူတို့ လုပ် မှ.. တကယ့်... ဒိုင်လူကြီး.. chef ကြီး တွေ ကို ကြည့် ရတာ.. နပိုလီယံ တို့ ဟစ်တလာ တို့.. ဘုရင့်နောင် တို့ လား အောက်မေ့ ရ တယ်။ အော် လိုက်..ငေါက် လိုက်.. ကြိမ်း လိုက်..မောင်း လိုက်.. ။ သူတို့ မို့.. ပြိုင်ပွဲ ခန်းမ ထဲ ၀င်လာ ရင်.. ငတိ တွေ မှာ..ငြိမ်လို့...။ တယောက် က များ.. မျက်လုံး တချက် ၀င့်ကြည့် လိုက် ပြီ ဆိုရင်.. ပြို တော့ မလို..မျက်နှာ တွေ နဲ့...။ ငို တဲ့ သူ က..ငုို.. ရီ တဲ့သူ ကရီ.. ။ ကြည့်လို့ တော့..ကောင်း နေတာ ပါပဲ..။ ထူးဆန်းတာက.. ကိုယ့် ထက် ပို..အစားအသောက် ၀ါသနာ ပါတဲ့.. အမျိုးသားက.. အဲဒီ အစီ အစဉ် ကို မကြိုက်ဘူး တဲ့..။ “ ဘာလဲ..အစားအသောက် လုပ်စား တာများ..ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် မရှိဘူး... ဖြစ်ပျက် နေ လိုက် ကြတာ.. ” တဲ့..။ ဟုတ်တော့ လည်း
ဟုတ် သား.. တခါတလေ stress test ဆိုတာ ပါသေးတယ်။ stress တွေ များလို့..ဖျော်ဖြေ ရေးကြည့် ပါတယ် ဆို မှ.. သူတို့ နဲ့ လိုက်ပြီး..ချွေးပြန် ရတာ..ရင်မောရတာ.. တကယ် မတန် ဘူး။
လပေါင်း များစွာ.. တပတ် ..၅ ရက် ပြ တဲ့..အဲဒီ အစီ အစဉ် ပြီး သွာတော့..ဗိုလ် စွဲ သွားတဲ့.. မာစတာ ရှဖ် က.. လူရွယ် ဥပဒေ ဘွဲ့ရ တယောက်..။ သူ့လို ဗိုလ် စွဲ တဲ့ သူ မပြော နဲ့.. အဆင့် ၁၀ လောက် မှာ ပြုတ်တဲ့ လူတွေ တောင်.. နာမည် တလုံး ရ.. လူသိ များပြီး..စားသောက် ဆိုင် တွေ ဖွင့် ဖို့ တာဆူ နေ တာ.. ဆိုတော့... အဲဒီ ရှေ့ နေ လည်း.. မာစတာရှဖ် ဆုကြီးကို ကိုင်ပြီး ..ဘာ ဆက်လုပ် စား မလဲ မသိပေ။ သူတို့ တွေ များ ကြည့် လိုက်ရင်.. တကယ့် ကို စတိုင် တွေ မလိုင် တွေ နဲ့.. ဆံပင်ရှည် ကြီးတွေ ကို နဖူးပြောင် နေ အောင် စည်း .. ဆံထုံး ထုံး... ရှဖ် ၀တ်စုံ အဖြူ ကို ..အပေါ် ဆုံး ကြယ်သီး ဖြုတ်..ရင်ဖုံး တခြမ်း ဟ ပြီး.. အားရ ပါးရ.. ချက် နေ တာများ.. ကီဗင် ကော့စနာ တို့.. ရပ်ဆဲလ်ခရိုး တို့.. ဘရက်ပစ် တို့ တောင်.. မေ့ တယ် .. တကယ်...။
အချက် အပြုတ် ၀ါသနာ ပါတဲ့..ကိုယ့် အိမ်က..ဆရာ လည်း.. စိတ်တွေ ပါ ပြီး..ငါလည်း..အသက်ကြီး ရင်.. home restaurant ဖွင့်မယ် လုပ်ရော..။ “ဟင်.. ဂစ်တာ ဆိုင် လည်း ဖွင့် မှာ ဆို.. ” ဆို တော့.. “ ရတယ်.. ၂ ခု လုံး လုပ်မယ် ” တဲ့..။ အကျင့် မကောင်းပုံများ..။ ( တော်ကြာ..မချစ်ကြည်အေး စားသောက်ဆိုင် နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်နေ အုံးမယ်..)
ပြီး..ပြောသေးတယ်..။ ယူ တို့ မိန်းမ တွေ.. ဟင်းချက် တယ် ဆိုတာ.. ကိုယ့် အိမ်က..မီးဖိုချောင် တင် စိတ်ဝင်စားတာ.. ။ ဘယ် နာမယ်ကျော် ရှဖ် ကြည့် ကြည့်..ယောက်ျား ချည်း ပဲ တဲ့..။ သူက.. ကျိုးကြောင်း စိတ်ဖြာ ပြ သေးတယ်။ “ ဘယ် ဖြစ် မလဲ.. မိန်း မ တွေ..ဟင်းချက် ရင်..ဟိုဟာလေး..တို့ တိ..တို့တိ..ဒီဟာလေး တို့တိ တို့တိ.. ငါတို့ တွေက တော့..အကုန် ပြစ်ထဲ့.. ရှိသမျှ မှောက်ထဲ့ တာပဲ ” တဲ့..။ ဟုတ် လည်း ဟုတ်ပါ့.. သူတို့ ဟင်းချက် ရင်...ကြော်ပြီး သုံးပြီးသား ဆီ ဆို..လုံးဝ ပြန်မသုံး..။ အဲဒါ က..အရေး မကြီး.. ကိုယ်တွေ မှာ တော့.. စီးတဲ့ ရေ..ဆည် တဲ့ ကန်သင်း တင် မက.. ဆေးတဲ့ ပန်းကန် ပါ.. ဖြစ် နေရ တာ ကို တော့..ထဲ့ မပြော ။ သူတို့ က..ချက် ပြီး သွားရင်..မီးဖို နဲ့ ရေစင် ကို လုံးဝ ပြန် လှည့် မကြည့်တော့.. ။ ကိုယ်တွေ မှာ..ဆေးပေတော့.. ရှင်းပေတော့..။ ဘာပဲ ပြောပြော..ချက် ကျွေး တယ် ဆိုရင်ပဲ..ကျေးဇူး တင်ပါတယ်လေ...။
ကြုံတုန်း..ကြော်ငြာ ၀င် ရ ရင်တော့.. သူက.. စင်ကာပူ..ငှက်ပျောရွက် ဆိုင်က..ကုလား ငါးခေါင်းဟင်း မျိုး ကိုတော့.. ရှယ်ဗျ..။း)
ငါးခေါင်းဆရာ ရဲ့ မချက်ပြုတ်မှီ..အခင်းအကျင်း..
ကိုယ်တို့ နေ တဲ့ မြို့လေးက လည်း.. အားလုံး နဲ့ ခပ်ဝေးဝေး.. ဗမာ အစား အစာ မရှိ..ဘာမရှိ ဆို တော့ လည်း.. တခါ တရံ မှ ရတဲ့..ငါးခေါင်း ကို..မျှော် ရတာ.. အမြဲ ချက် မစား နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ မြေနီနီ မြို့လေး မှာပဲ.. ရှိစု မဲ့စု ဗမာ မိတ် ဆွေ လေး တွေ.. ပိတ်ရက် ဆို.. ဟိုဟာ ချက်စား..ဒီဟာ ချက်စား.. စုပြီး.. လုပ်လေ့ ရှိတယ် ပေါ့။ တရက် တော့.. ကိုယ့် ဆရာ ရဲ့ ငါးခေါင်းဟင်း ကို..အားကျ မခံ.. တခြား ဆရာ တယောက် ကလည်း..သူ့ ရဲ့.. Grandpa recipe ဆိုပီး .. လုပ်ပါ လေ ရော..။ တကယ့် ကိုပဲ..သူ့ အဘိုး က.. ဆွေစဉ် မျိုးဆက် ပေး ခဲ့ ရင်း ..သူ့ လက်ထဲ ကို ရောက်လာ တဲ့.. “ ဘဲ အရိုးပျောက် အစာသွပ် ပေါင်း ...” တဲ့ လေ..။ အတော် လည်း လက်ဝင်ပြီး.. အချိန်ကုန် တာကြောင့်..ဘယ်စားသောက် ဆိုင် မှတောင်..တင်မရောင်း နိုင် တဲ့..ဟင်းလျာ တခု လို့ ဆိုတယ်....။ သိတယ် မဟုတ်လား.. ကိုယ် က တော့.. သွားရေယို ယုံထက် မပို ပေမဲ့.. home restaurant ဖွင့်ချင် တဲ့ တယောက်က.. ဘဲ အရိုးထုတ်နည်း ကို....စိတ်ဝင်စား လို့ .. သင်ချင် ပါသတဲ့.. ။
အဲဒါ နဲ့.. တရက်တော့.. စိတ်ကူး တွေ လည်း ပေါက်တုန်း.. ဟို အကို ရဲ့..ဘဲပေါင်း အရိုးပျောက် .. သင်ခန်းစာ ကြီး..စတင် ပါတော့ တယ်။
တကယ်တော့..ဘဲလေး ခများ.. ဘာရောဂါ မှ..မရှိရှာ ပဲ.. မီးဖိုချောင်.. အော်ပရေးရှင်း သီရေတာ ထဲ မှာ.. ခွဲစိတ် ခံ ရ တာပါ..။ ဘဲဆရာ..အကို.. က..ဒီ မြို့ လေး ရဲ့ ဆေးရုံ..အရေးပေါ် ဌါန က..ဆရာဝန် ဆို တော့.. ဘဲလေး ခမျာ.. အရေးမပေါ် ချင်ပဲ.. အရေးပေါ် ခန်းထဲ ရောက် လာ ရ ရှာ တယ်။ ကြည့် အုံးလေ.. ဘဲလေးကို ခွဲ စိတ် မဲ့..ကိရိယာ တန်ဆာ ပလာ တွေ.. က..။
ဘဲ တကောင် ရယ်.. ခွဲစိတ်ခန်း သုံး ကိရိယာ တချို့ ရယ်.. အထဲကို သွပ် မဲ့ အစာ တွေ..ရယ်...။
သွပ်မဲ့ အစာ ကတော့..၀က်သား သုံးထပ်သား ဆိုတော့.. အီစိမ့် နေမဲ့ ပုံ ကို ..မြင်ယောင်သာ ကြည့်ပေတော့..။ နောက်.. ဂေါ်ရခါး သီးရယ်.. မှိုရယ်.. တောင်ဆိုင် လို့ ခေါ်တဲ့..တရုတ် ရိုးရာ အရွက် ခြောက် တခု လို့.. ဆိုတယ်။
တယောက်က.. ဘဲ ကို လုံးဝ ပုံမပျက် အောင်.. ခက်ခက်ခဲခဲ ကို အရိုးစု ကြီး တခု လုံး ကို..ခွဲစိတ်ခန်း ဓါး နဲ့ ..စိတ်ရှည် လက်ရှည်.. လှီးဖြတ် နေတဲ့.. အချိန် မှာ.. နောက် တယောက် က . စိတ်ဝင် တစား.. ဓါတ်ပုံ တွေ တဖျပ် ဖျပ် ရိုက် နေ လေ တဲ့.. အမျိုးသား ၂ယောက် ကို ကြည့် ပြီး..... အဲဒီလောက် ခက်တာ များ.. မစား ရ ရင် လည်း နေပါစေ...လို့ တွေးနေမိ တယ်...။ အင်း..ပြောသလို..မိန်းမတွေ.. မီးဖိုချောင် ၀င်တာ.. ၀ါသနာပါ လို့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ.. ဟုတ် တော့ နေပါ ပြီ နော်..။ ဘဲ ဆရာ... အကို ကလဲ ပြော တယ်..။ သူတို့ မိသားစု မှာ..အဲဒီ နည်း ကို..သူ့ အဖေ က.. သင်ပေး တော့.. သူ့ အမ တွေ တယောက်မှ.. စိတ် မ၀င်စား မတတ် မြောက်ပဲ..သူ တယောက် တည်း..ရ ထား တာ တဲ့..။
.. ပထမ ဆုံး..ဘဲလေး ကို..ဇောက်ထိုး ဆွဲ ပြီး.. ဖြည်းဖြည်း ချင်း..အလယ်ရိုး ကြီးကို.. ဖော်ဖော် ပြီး..လှီး ယူ ရ တယ်..။..ဒူးစစ် တွေ နားမှာ တအား ကို လက်ဝင် တာ..။
ဒါလေးက.. ဘဲ စော် နံစေ တဲ့.. အဆီဗူး လေး.. တဲ့.. အတော် သတိ ထား ပြီး ဆွဲ ထုတ် ရ ပါတယ်။
( lymph nodes ) တမျိုး ပေါ့ လို့.. တခါ တည်း..စာပါ သင်ပေး လိုက် သေးတယ်..။
ပြီးသွားတော့.. အိတ်ကြီးလို ဖြစ်သွားတဲ့..ဘဲ ကောင် ကြီး ထဲကို.. အခုန ၀က်သား တွေ.. အစာ တွေ.. ကြိုက် သလောက် သွပ်ပေ တော့... လည်ပင်း ထိ ရောက်အောင် သွပ်..
ပြီး တော့.. အရိုးထုတ် ခဲ့တဲ့.. အပေါက် ကို.. သေချာ ပြန် ချုပ်.. လည်ပင်း ထိပ်က.. အပေါက် ကိုပါ.. ဆွဲ စိ ပြီး ပိတ် ချုပ်...
နောက်ဆုံး.. ၃ နာရီ လောက် အချိန်ယူ ပြီး..ပေါင်းအိုး နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါ.. ဟောဒီလို..စားချင် စဖွယ်.. ဘဲကောင်လုံး အရိုးပျောက်..အစာသွပ်...ရ လာ ပါတော့တယ်။
ကဲ....၀ိုင် အနီလေး တခွက်စီ.. ထဲ့ ပြီး.. ချီးယားစ် ....
သူ့ အရသာ က.. ဘဲသား ဆိုလည်း ဟုတ်..၀က်သားဆို လည်း ဟုတ်.. နူးညံ့ ပြီး..အရသာ တကယ် ထူး ပါ ပေတယ်။
ဘဲ ဆရာ ရဲ့ မိသားစု..ရန်ကုန် ပြန်နေတုန်း ဆိုတော့.. ကိုယ်တို့ သုံး ယောက် ထဲ .. ကမ္ဘာ့ ဖလား ကြည့် ရင်း.. ဘဲပေါင်း တဖဲ့ စားလိုက်.. ၀ိုင် တငုံ သောက်လိုက်..။
ကို်ယ် တို့ ၂ ယောက်က.. စားကောင်း လိုက်တာ..လို့ ပြောလိုက်.. ဘဲ ဆရာ ကလည်း.. ကျနော်..နောက်တခေါက် ထပ်လုပ် အုံးမယ် ... လို့.. ကြိမ်းဝါး လိုက် နဲ့ ပဲ.. ဘဲတကောင် လုံး.. ၃ရက် လောက် နေ မှ ကုန်သွား တော့တယ်..။
ဒီနေ့ တော့ ... မြေနီနီ မြို့လေး မှာ..ဘဲဆရာ နဲ့.. ဗမာတသိုက်.. မွေးနေ့ ပွဲကျင်းပ မယ် လို့ ပြော သည်.။ မွေးနေ့ရှင် ရဲ့ ကိုယ်တိုင် လက်ရာ... My Grandpa recipe လည်း.... မပါ မဖြစ်.. ဟင်းလျာ တပွဲ ဖြစ်ပေ လိမ့် မည် ပေါ့..။ ဒီ တခါ.. ကိုယ်က.. မြို့ တော် ရောက် နေ လို့... ဘဲအရိုးပျောက် ကို ..၀င် မ နွဲ နိုင် တော့..။
ခင်မင် နေ ကြတာ..ကြာပြီ ဖြစ်ပေ မဲ့.. ဘလော့ အကြောင်း..တခါ မှ စကား မစပ် ဖြစ် လို့.. မပြောပြ ဖြစ် တာကြောင့်.. ခု လ ပိုင်း မှ..ဒီဘလော့ ကို စ ဖတ် ဘူး တယ် ဆို တဲ့..ကိုကျော့် အတွက်... ဒီ ဘလော့ က နေ ပဲ..မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးလိုက် ပါ တယ်။
Happy Birthday ပါ.. ကိုကျော်
မဖတ်ရင်..မရဘူး ..ဖတ်မှ..ရမယ် ဆိုပါတော့...း))
Labels: Foods , friends , personal
အားပါး ... မကေရဲ့ ဘဲရိုးပျောက် အစာသွပ်က လက်ဝင်တာကတော့ တဆုံးပါပဲလား။ စားပြီးရင်လဲ သွေးကျဆေးသောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဆောင်ထားရမယ့်ပုံပဲ။ ညစာမစားခင် လာဖတ်တာ ဘိုက်ထဲ တဂွီဂွီမြည်လို့ လစ်ပြီ။ မအိပ်ခင် နောက်တခေါက်လာဖတ်အုံးမယ်။ :)
ဘဲအရိုးထုတ်တာ အတော်လက်ဝင်တာဘဲ အားပါးပါး
Jamie Oliver ကို အမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်။။
စကားပြောမြန်။ လုပ်တာလည်း သွက်လက်။
travel & livingကပဲ Curtis Stoneဆိုလည်း ကြိုက်တာပဲ..။သူက သြဇီက..။ ဂေးလားမသိဘူး။
နောက်ဆုံးပိတ် ဘဲကိုချုပ်တာဘဲ သွပ်သွပ် ဖြစ်မိတယ် သောက်ကျိုးနဲ။
တို့လဲမသိပါဘူး ။ စဉ်းစားကြည့်တာ.
happy birthday ko kyaw.
4 Sep 10, 05:10 AM
kom: မှ ဆရာဝန်လိုဘဲ အမှန်က အဲဒီ ဘဲကို လုပ်တဲ့အစ်ကို ကဆရာဝန်ပါဆိုမှ မှန်မတယ်။
kom: ဘဲ ဆရာ... ဆရာဝန် အကို (လို့ရေးထားတဲ့မြန်မာစာ ကမ၇ှင်းလို့နစ်ခါပြန်ဖတ်ရတယ် ဘဲကိုလုပ်တဲ့လူရဲ့အစ်ကိုက မ
4 Sep 10, 05:06 AM
kom: ချက်ကျွေးရင်ကျေးဇူးတင်. မင်းတို့မိန်းမတွေက demand သိပ်များတယ်လို့ပြောလိုမ့်မယ်။
kom: ဆေးတဲ့ ပန်းကန် ပါ.. ဖြစ် နေရ တာ ကို တော့..ထဲ့ မပြော
4 Sep 10, 05:05 AM
kom: ဂျုလိုင့်ငါးခေါင်းတေါ ကတော့ကြောက်စရာကြီး။
kom: ငါးခေါင်းက ပြုံးပြုံးကြီးလိုဘဲ။
အမသိလား အမချစ်ချစ်ပြောတာမှန်မှာ။ ကျနော်က စားသာစားချင်တာ မီးဖိုချောင်အလုပ်စိတ်မ၀င်စားဘူးဗျ။ အခုမှ ချက်ကျွေးမဲ့သူမရှိလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ်စားချင်တာကို ချက်ရတာ။
ကြက်တွေကို ခုတ်ပီးသားရောင်းပေလို့သာ... မခုတ်တတ်ဘူးဗျ။ ဘဲအကောင်လုံးဆို ပီးပါလေရော..
ပြင်ဆင်ထားတာက ရှယ်ပဲနော် ....
ါ်ူးါသဒ်ူုာယØÅÆဒယ်ာ် .... ပျူလို နုတ်ဆက်
တာပါ မကေ ....း)
ခက်ခဲနက်နဲလိုက်တာ။ နေပါစေတော့ မလုပ်စားတော့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကြက်ဥဘဲဥ တောင် အခွံနဲ့မဟုတ်ရင် ကောင်းမှာလို့ တွေးပြီး အပျင်းကြီးတာ။
ဘဲတကောင် လူ ၃ယောက်စားတာ ၃ရက် တဲ့။ နှေးလွန်းတယ်။ :D
အဲဒီ ဘဲအကိုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ ကေ..။ :)
ဆရာဝန်နား ရောက်လာတဲ့ ဘဲလေး ကံဆိုးပေစွ... အရေးမပေါ်ချင်ပဲ အရေးပေါ်ခန်းထဲရောက်ပြီး အခွဲခံရတဲ့ ဘဲလေး ပေပဲ...
ဟုတ်တော့ ဟုတ်လောက်တယ်... မိန်းမတွေက ချက်သာ ချက်တတ်တယ် စိတ်တော့ တအား မရှည်ကြဘူး... သူတို့ကမှ ချက်ပြီဆိုရင် အကျအန... တိကျတဲ့ recipe တွေ ဘာတွေနဲ့...
ကေ့ ဆီက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာလေး ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ... ဘဲ ဆရာ ကိုကျော်ကိုလဲ မွေးနေ့ ဆုတောင်း တောင်းပေးတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါ...း))
ဘဲဟင်းနဲ့ဝိုင်အနီနဲ့သိတ်မလိုက်ဘူးလားလို့- ၀ိုင်အဖြူနဲ့လဲလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့။ မျက်စိပိတ်ပြီး ကြက်ကိုအရိုးအကုန်ထုတ်တာတော့၂မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးတာ TV မှာတွေ့ဘူးတယ်။ Professional ကိုး၊
ဟ ဟ ကေရာ တို့က ခုမှ ပိုက်ပိုက်စုတုန်းပါ... အိမ်ကလူကြီးက အားမပေးဘူး စားသောက်ဆိုင်က သိတ်ပင်ပန်းလို့တဲ့...။ ကေတို့ ဖွင့်မှပဲ လာစားမယ် အလကား ခိခိ။ ဘဲ မကြိုက်ဘူး သူ့ အနံ့ကို မကြိုက်လို့လေ...ငါးခေါင်းတော့ အရမ်းကြိုက်ပဲ...
I just got back from Ko Kyaw's Birthday Party.
That Duck curry was AWESOME!!!!!
btw ..I am back in Kalgoorlie..
Happy Birthdayပါ ဘဲဆရာအကို
ထမင်း မစားချင်လို့ ဘလော့လည် နေတာ ဘိုက်စာ လာပြီ ပြန်တော့မယ်ဗျာ
မွေးနေ့ ရှင်အတွက်လည်း ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ
တော်တော်ကို စိတ်ရှည်တဲ့သူမှ လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်... ဘဲအရိုးထုတ်တာ အချိန်ဘယ်လောက် ကုန်လဲသိချင်လိုက်တာ
အစ်မ ဘဲပေါင်းကို အားကျပြီး မနေ့က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကြက်ပေါင်းလုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ။
အရိုးမထုတ်တော့ မြန်ပါတယ် ။
(နာမည်ကြီး chefတွေက ယောင်္ကျားတွေကြီးပဲ။)
(တော်တော်စိတ်ရှည် (လက်ရှည်လားတော့မသေချာ)တဲ့ အစ်ကိုမို့ပါ။)
ငါးခေါင်းချက်နည်းကို ရှဲဖို့ ကိုယ့်ဆရာဆီမှာ ပြောပေးပါ အစ်မကေ...
အင်း ဖတ်ပြီးတော့ ကုိုယ့်ဘာသာ ပြောမိတယ် ငါလဲစားချင်လုိုက်တာလုို့ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။
ဒီရက်ပုိုင်း Julie and Julia ကြည့်တယ် မကေဘလော့မှာ ဒီပုို့စ်ပါဖတ်ရတော့ ကုိုယ်တုိုင်တောင် အချက်အပြုတ်သင်ရမလုို ဖြစ်နေတယ်။ သုို့တည်းမဟုတ် ချက်ပြုတ်တတ်သော ချက်ချင်ပြုတ်ချင်သော မိန်းမ နောက်တစ်ယောက် ယူရကောင်းမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ ဒါလဲ မကုိုက်သေးပါဘူးလေဆုိုပြီး ဆုိုင်မှာပဲ စားဖုို့ ဆုံးဖြတ်လုိုက်ရတယ်။ ဝုိုင်နဲ့ ဘဲပေါင်းနဲ့ ကွာ . . . ပြောရင်းတောင် စားချင်လာပြီ . . .